के भयो प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच वान टू वानमा ? - Baikalpikkhabar
के भयो प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच वान टू वानमा ?
काठमाडौं .बैशाख ८,
काठमाडौंस्थित होटल मेरियटमा बुधबार साँझ करिब साढे दुई घण्टा प्रधानमन्त्री ओली र नेपालबीच वान टू वान वार्ता भएको हो ।
बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री र नेता भट्टराईबीच कुराकानी भयो । यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैबाट आफूमाथि घेराबन्दी भएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपालले आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेको गुनासो सुनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि कसरी घेराबन्दी भयो भनेर लामो व्याख्या गरेका थिए ।
भट्टराईको सुझाव पछि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई टेलिफोन गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
बुधबार, ०८ बैशाख, २०७८, रातीको ०९:३८ बजे